Unokukhetha njani ukuguqula ngokufanelekileyo?
Iimpawu ezilungileyo kakhulu kubafazi kunye namadoda
Hayi, ihlabathi lanamhlanje lizele ixesha elixhasayo kwaye, ngelishwa, ininzi yabo ayinayo inxalenye yamnandi. Umthwalo wesifo ohlala unomdla, ngenxa yoko sifumana ukucaphukisa, uxinzelelo, ukuphazamiseka, ukuphazamiseka kokulala, ukuphazamiseka kuhamba kunye nomsebenzi wethu. Uthotho lwe-hawthorn okanye ezinye izityalo onokuzifumana, unempembelelo yazo ayiyona nto. Kule meko, ukuzondla kakuhle kukuza kuhlangula. Kukho iintlobo zazo ezininzi: iipilisi zokuzonwabisa, iipilisi zeentsholongwane, uxinzelelo, ukuphazamiseka kokulala. Kukho izixhobo ezinamandla okanye ngaphezulu "ezithambileyo". Konke kuxhomekeke kwisiphumo ofuna ukufezekisa.
Iipilisi ezisuka kuxinzelelo kunye neentsholongwane, ukuqokelela
Ukuqonda kangcono into oyifunayo, makhe sijonge kumaqela e-sedatives. Ukwahlula oku kulandelayo:
Inkqubela. Ziyalelwe imiqobo yokulala. Ziyakuthintela inkqubo ye-nervous, ukuphucula nokuphumula. Ingozi enkulu kumathebhulethi anjalo ngumlutha, ngenxa yoko ayiyi kukwazi ukulala ngaphandle kwabo, ngoko qaphela ukuwamkela nokusela kuphela xa kuyimfuneko;
IiNootropiki okanye, ngenye indlela, ivuselela i-neurometabolic. Ziyasetyenziswa ukuphucula imemori, ingqwalasela, ukuphucula ingqondo. Njengomthetho, ayinabungozi kwaye ayibangeli umlutha;
Ukuxhatshazwa. Zineentlobo ezininzi zezicelo, ezisekelwe ekulwa nokudandatheka. Ukuphucula imizwa, ukunciphisa uxinezeleko, ukuxhalaba nokunganakwa, ukunciphisa uxinzelelo kwiinkqubo zeentlanzi ngokupheleleyo, ukuphucula ukulala. Ininzi yabo ayibangeli umlutha, kodwa kunemiphumo emibi ngohlobo lokulala, ukungabikho kwengqondo, ukungabikho komzimba. Konke kuxhomekeke kwiklasi apho baxela khona kunye nemigudu yesenzo;
Neuroleptics okanye antipsychotics. Izidakamizwa ezinamandla, umsebenzi oyintloko wokwenza unyango lwe-psychosis (kuquka i-delirium kunye neengcinga). Musa ukuba ngumlutha.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba zonke iindidi ze-sedatives, kungakhathaliseki ukuba iyeza "ezinamandla" okanye "ubuthathaka" kufuneka zimiselwe ngudokotela oya kuzo, ukuze agweme imiphumo engapheliyo kwixesha elizayo, umonakalo, ukudlula ngaphezulu, iziphumo ezingathandekiyo.
Ukulungelelanisa ngakumbi kumadoda okanye kwabasetyhini
Kubalulekile ukwazi ukuba ukukhethwa kwesilwanyana akuxhomekeke kwisini somguli. Oogqirha bayaqhubeka bevela kwiimpawu zengqondo kunye nezikhalazo, ngoko ke enye kunye neyokulinganisa efanayo inokuphatha ngokufanelekileyo amadoda namabhinqa.
Uludwe lwezinto ezinokwakheka kakuhle
Masiqale ngezilwanyana "ezikhanyayo," ezingenakho ukulimaza iingcebiso, kodwa ziza kuphucula impilo yakho yengqondo:
Novopassit. Ukubuyisela ubuthongo kunye nokunciphisa uxinzelelo oluvela kwinkqubo yesistim ephakathi, ekuncedeni ukulwa noxinzelelo. Ngaba uhlolo olulungileyo loogqirha;
Persen. Isithako esiyinhloko sisisiseko se-valerian kunye ne-hops extract. Ukuthandeka ngokuthandana nobuthongo, kunceda ukuzincama, kunciphisa umdla;
Afobazol. Ukwamukelwa ngokufanelekileyo kwezi pilisi sele kusekho ngomhla we-5 kunika umphumo omkhulu wokubuyisela umsebenzi wobuthongo nokuphelisa umxhelo ogqithiseleyo.
Ezi zine ezineempawu ezinamandla zibukeka kanje:
Phenazepam. Ukubhekisela kwiqela lezonxiliseli, unceda ngeengxaki zokulala;
Atarax. Ulwabalalisa kunye nokungazinzi, kunye nokukhulula uxhalabisayo, uxhasa inkqubo ye-nervous;
Tenoten. Ubunzima obuninzi bezinto ezikhoyo kwinqanaba le-antidepressants, i-tranquilizers kunye ne-nootropics. Ukuphucula imemori, ingqalelo, isusa ukukhungatheka, uxinzelelo, uxhalabisayo;
Adaptol. Nika abo banamaxhala amaninzi, ukwesaba, ukwanda okukhulu kunye nalabo abanzima ukulawula iimvakalelo. Ukulala xa uthabatha amayeza akakho.
Umnqweno wokususa ebomini bakho iimvakalelo ezingadingekile, uxinzelelo, ukwesaba, ukucaphukisa kunye nokuncinciza kunconywa. Ukuphazamiseka kwe-psyche yinto efanayo nesifo esifanayo nesantya sokugulisa i-gastritis esele sininzi, kodwa uluntu lwethu ngesizathu esithile lubona ukubonakalisa kwabo njengento engavamile. Emazweni aseNtshona nakwi-United States, izazi zengqondo, i-psychotherapists, i-psychiatrists, i-neurologists kunye nezinye iingcali zifunwa kakhulu emva kweengcali zonyango. Yonke into yokuba izilwanyana zithatha ipesenti enkulu yabemi. Akukho nto iphosakeleyo ngale nto, kodwa kubalulekile ukudibana nodokotela ukuze ungenzi nantoni na isicwenge.
Uphi umoya ovela kuwo?
Isihlomelo siyinxalenye eyongezelelweyo yomzimba womntu?
Ziziphi iziyobisi ezisetyenziselwa amazinyo e-anesthesia?
Ukubonelelwa ngoncedo lokuqala lwezonyango
Imigaqo eyisiseko yokulala ngokwesondo
Imilinganiselo Yobunono Yabantu
Phumla kwiRiphablikhi yaseAltai
Inombolo yezesayensi, amanani omlingo
Njani kunye nokuba luninzi lokutshisa ilanga kwi-solarium
Indlela yokukrazula iinwele ezinamafutha
I-Skewers yemvana ene-lemon ne-cheese sauce
Iifake zamehlo ahlwayelweyo
Inkonzo yothando - intsomi kunye nenyaniso